AH: Norah Jones
နောက်ပိုင်း သူမရဲ့ ဂီတ၀ိုင်းထဲက သူမရဲ့ ချစ်သူ ဘေ့စ်ဂီတာသမား Lee Alexander နဲ့ လမ်းခွဲပြီး ထွက်လာတဲ့ အယ်လ်ဘမ် The Fall ထဲမှာ သူမရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ရောယှက်နေတဲ့ သီချင်းလေးတွေလဲ ခံစားလို့ကောင်းတယ်။ အဲဒီထဲက Young Blood ကိုကြိုက်တယ်။ Norah Jones ရဲ့ သီချင်းလေးတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by AH at 5/29/2013 06:58:00 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 29, 2013 at 11:13 PM
ဟုတ်တယ်နော်။ အသံကလည်းအက်တက်တက်နဲ့ ခပ်အုပ်အုပ်ထူးခြားတယ်။
ကျေးဇူးပါရှင်။ နုို့ မို့ ရင်တော့နားထောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရယ်။
San San Htun May 30, 2013 at 11:44 PM
I listened yesterday from your blog. Her voice and music always make me calm, relax and peaceful. Thanks for sharing.